Ukuqamba kabusha: Ukuthi Ukwamukela Ushintsho Kuzolikhulisa Kanjani Ibhrendi Yenkampani Yakho | Martech Zone
Ukuqamba kabusha: Ukuthi Ukwamukela Ushintsho Kuzolikhulisa Kanjani Ibhrendi Yenkampani Yakho
NgoLwesihlanu, Okthoba 29, 2021 NgoLwesihlanu, Okthoba 29, 2021 Yuliia Mamonova
Akusho ukuthi ukwenza kabusha umkhiqizo kungaveza imiphumela emihle kakhulu ebhizinisini. Futhi uyazi ukuthi lokhu kuyiqiniso uma izinkampani ezisebenza ngokukhethekile ekwakhiweni kwemikhiqizo kuyizona eziqala ukukhiqiza kabusha.
Cishe u-58% wama-ejensi enza kabusha amabhrendi njengendlela yokuthuthukisa ukukhula okubonakalayo ngobhubhane lwe-COVID.
Inhlangano Yezohwebo Yezokukhangisa
Thina at I-Lemon.io uzibonele mathupha ukuthi kungakanani ukumelwa kabusha kwebhrendi nokungaguquguquki komkhiqizo okungakubeka ngaphambi komncintiswano wakho. Kodwa-ke, sifunde futhi ngendlela enzima ukuthi kulula njengokuqamba kabusha kungase kuzwakale, kungaphezu nje kokwakha ilogo entsha noma ukuthola igama elisha. Kunalokho, kuyinqubo eqhubekayo yokudala nokugcina ubuwena obusha — ukudlulisa ngokungaguquki umlayezo ofuna amakhasimende akho awuhlanganise nomkhiqizo wakho.
Ibhrendi enhle kuzo zonke izinkundla inyusa kakhulu imali engenayo yenhlangano ngamaphesenti angama-23.
LucidPress, Isimo Sokuvumelana Komkhiqizo
Futhi lokhu ukubala nje ezimbalwa. Kulesi sihloko esifushane futhi esiqondile, sizokuhambisa enqubweni yokuqamba kabusha, sabelane ngamathiphu, siveze izingibe ezivamile, futhi sikubonise ukuthi ungazigwema kanjani.
Indaba ye-Lemon.io Rebrand
Kuthatha imizuzwana engu-7 kuphela ukwenza umbono oqinile wokuqala.
Lokho kusho ukuthi imizuzwana eyisikhombisa kungase kube yiyo kuphela onakho ukuze ukholise ikhasimende elingase libe khona ukuthi likukhethe ngaphezu komncintiswano wakho. Nakuba lokhu kuyisithiyo ngokwakho, ukukholisa amakhasimende ngokuqhubekayo ukuthi aqhubeke ekhetha wena kunzima nakakhulu. Lokhu kuqaphela kusiholele empumelelweni esimatasa ngayo namuhla.
Ake ngikungenise kafushane ngomlando we-lemon.io.
I-Lemon.io yaqala yasungulwa ngo-2015 lapho umsunguli (u-Aleksandr Volodarsky) ehlonza igebe endaweni yokuqasha ozimele. Ngaleso sikhathi, ukwenza uphawu kwakuyinto yokugcina emiqondweni yethu. Njengamabhizinisi amaningi amasha, senze amaphutha ekuqaleni kohambo lwethu, elinye lawo beliziqamba ngokuthi “Ama-Coding Ninjas.” Ngikholwa, kwakuzwakala kulungile ngaleso sikhathi ngoba kwakusemfashinini, futhi sasigxile kakhulu ekudaleni okuqukethwe.
Kodwa-ke, saba nokuvuka kabi lapho sithola ukuthi ukukhula kwebhizinisi kwehlile futhi okuqukethwe kukodwa kwakungasondeli ngisho nokwenele empumelelweni yebhizinisi lethu. Besidinga okungaphezu kwalokho ukuze singene emhlabeni oqhudelana kakhulu wokuqashwa kwabantu abazimele. Yilapho indaba yethu yokuqamba kabusha yaqala.
Kunezifundo eziningi ezithokozisayo esizifundile ohambweni lwethu lokuqamba kabusha, futhi sithemba ukuthi, njengoba silandisa indaba yethu, ungase futhi ukhethe ezimbalwa ezizozuzisa umkhiqizo wakho.
Kungani Kudingeka I-Rebrand
Kungenzeka ukuthi uyazibuza ukuthi kungani kwadingeka ukuthi sishintshe igama nokuthi kwakubaluleke kangakanani.
Nokho, ngaphandle kweqiniso lokuthi sase sidlule esikhathini sama-Ninjas nama-Rockstars futhi sabelane ngegama lasendulo nesikole sezinhlelo e-India, siphinde sabona ukuthi kwakudingeka sikhuthale ukuze siphile emakethe yokuzimela eqhudelana kakhulu. I-niche yezimakethe ezizimele iminyene kangangokuba okuwukuphela kwendlela yokugqama ukuba nomkhiqizo oqinile futhi onenkanyezi.
Ekuqaleni, sasikholelwa ukuthi ukwehluleka kwethu kwakubangelwa umklamo wethu, futhi saphuthuma ezinyaweni zethu ukuya kumklami samcela ukuba ayiklame kabusha ibhulogi, lapho awenqaba khona ngesizotha futhi waphakamisa ukuthi yenziwe kabusha ngokuphelele. Leso kwakuyisipikili sokugcina ebhokisini, futhi kungaleso sikhathi, isidingo sokushintsha igama sabonakala. Eqinisweni, sabona ukuthi sasingenalo nhlobo uhlobo, futhi ngenxa yalokho, kwakudingeka silwele. Lesi kusengenye yezinqumo ezinesibindi nezivuza kakhulu esake sazenza njengenhlangano.
Nawa amazwibela esinyathelo ngesinyathelo sendlela esiyenze ngayo inqubo yokwenza kabusha amabhrendi. Imihlahlandlela yethu ayiphelele; nokho-ke, sizophana kakhulu ngolwazi esinalo. Nasi isifinyezo sezinyathelo esizilandelayo:
Sakha i-brand persona kanye ne-mascot yomkhiqizo - Ubudlelwano phakathi kwalaba ababili bunje: I-brand persona ngumlingiswa oyinhloko wendaba yakho, ongahlangabezana nezithiyo endleleni eya emgomweni wabo. I-brand mascot ingeyokubasiza ukuthi banqobe bonke ubunzima futhi ekugcineni bafinyelele izinhloso zabo. Empeleni, i-brand persona imelela izethameli zethu noma amakhasimende ethu, futhi i-mascot imele thina esinhloso yabo kuwukuxazulula izinkinga zabo.
Siqhamuke nemephu ye-Brand Persona's Buying Decision (BPBD). - Imephu ye-BPBD iwuhlu lwezizathu ezingaphoqelela izethameli zethu esiziqondise ukuthi zithenge okuthile kithi kanye nezizathu ezingenza ukuthi zingakwenzi. Lokhu kwasisiza ukuba siqonde izinqumo zokuthenga zobuntu bethu futhi sazi ukuthi yikuphi ukuziphatha okungahle kuzibeke eceleni. Inqubo ihilela ukufaka kuhlu izizathu zokuthi kungani noma kungani izithameli zethu esizihlosile zingathengi kithi.
I-brand essence matrix – Lokhu bekuyi-elevator pitch yomkhiqizo wethu eyabalela zonke izizathu nezindlela zokuba khona kwebhizinisi lethu. Ibonisa lokho okwenziwa ibhizinisi lethu futhi idlulisele amanani omkhiqizo wethu.
Indaba Yomkhiqizo - Indaba yomkhiqizo isiholele ekuqanjweni okufanele kakhulu, esigcine ukukwamukela.
Imiphumela Ye-Lemon.io Yokwenza Kabusha
Izinzuzo ezingaphatheki zokuqamba kabusha zifaka phakathi ukuthi kusilethele ukuzethemba, ugqozi, umuzwa wencazelo nenjongo, ingasaphathwa eyokuthutheleka kwemikhondo enomona.
Futhi, vele, okubaluleke kakhulu umphumela ukwenziwa kabusha kwebhrendi kube nawo emgqeni wethu oyinhloko. Indlela engcono kakhulu yokuveza lokhu ngokusebenzisa izibalo ngoba izinombolo aziqambi amanga.
Imiphumela ibimihle kakhulu futhi yasibona sifinyelela cishe ku-60% yenani lokulinganisa lethrafikhi elizuzwe eminyakeni emihlanu edlule phakathi nezinyanga eziyishumi sethule uhlobo lwethu lwe-Lemon.io.
Ukwakhiwa kabusha okuphelele kusibonile sisuka ezivakashini ze-4K siya ku-20K ngokwesilinganiso enyangeni yethu ehamba phambili. Sifinyelele ekukhuphukeni okumangalisayo okuphindwe izikhathi ezingu-5 izivakashi zethu nokuthengisa okusibeka ethubeni lokuthola i-10M GMV ngo-2021. Hlola lezi zithombe eziyingcaca zalokhu kukhula:
Ngaphambilini: Ukubhala amakhodi wethrafikhi ye-Ninjas kusukela ekuqaleni kwenkampani kuze kufike ekubhalweni kabusha:
Ngemva: Inqubekelaphambili eyenziwe phakathi nezinyanga eziyisishiyagalolunye zokwenziwa kabusha kwebhrendi.
Kufanele wenze nini kabusha uma uyisiqalisi (ngokusekelwe kulwazi lwe-Lemon.io)?
Isikhathi siyikho konke. Ukwakha kabusha igama kudinga umsebenzi omningi futhi kudla izinsiza eziningi, futhi kubalulekile ukwenza izinqumo ezibaliwe.
Sinini isikhathi esifanelekile sokwenza kabusha ibhrendi?
Kwa-Lemon.io, besazi ukuthi kwase kuyisikhathi sokushintsha isithombe senhlangano yenhlangano yethu lapho:
Bekungasebenzi! Isizathu sethu esikhulu sokuklama kabusha kwakuwukubona ukuthi uhlobo lwethu lwamanje lwalungalethi imiphumela esiyifunayo. Esimeni sethu, bekuyi-traffic ekhawulelwe ebesiyithola ngaphansi kwe-"Coding Ninjas". Sikholelwa ukuthi kufanele sithuthukise okuqukethwe kwethu kwaze kwaba yilapho sigcina sibona ukuthi sasimi ngokungalungile emakethe, futhi kwakudingeka sikhiqize kabusha ukuze sigqame.
Kube nezinguquko ezibalulekile ebhizinisini lethu - Izinkampani zihlala zishintsha. Uma ibhizinisi lakho lishintsha noma uhlele kahle uhlobo lwabantu lomkhiqizo wakho owuthandayo futhi ufuna ukungena kulo ngempumelelo kakhudlwana, ukwenza kabusha igama kungase kube inketho. Ngaphambi kokushintshela ku-Lemon.io, sisebenzele olunye uhlobo oluphathekayo lwabantu kanye namakhasimende, okugcine kwasisiza ukuthi senze izinqumo ezingcono futhi sifinyelele izindawo ezifanele.
Ngaphambi kokuba sidume kakhulu - Sibe nelungelo lokuqamba kabusha ngaphambi kokuthi sidume ngaphansi kwegama langaphambilini. Ngeke siphike iqiniso lokuthi izingozi ezihambisana nokuqamba kabusha ziyanda ngokwanda kodumo. Ngaphambi kokuthi uqashelwe, ubungozi buphansi njengoba abantu bengeke bazibone.
Besinezinsiza ezanele - Ukwenza kabusha amabhrendi kudinga kakhulu izinsiza, ngakho kuhle uma usuvele unebhizinisi elikuzuzele izinsiza ezanele zokuqalisa inqubo yokuqamba kabusha.
Kunini lapho okungesona isikhathi esifanele sokuqamba kabusha?
Ukuqamba kabusha akumele kwenziwe ngaphandle kwesizathu esiqinile. Uyazi ukuthi isisusa sakho sokwenza igama kabusha akulungile uma sisuka emizweni esikhundleni samaqiniso.
Unesizungu ngedizayini yelogo? Isithukuthezi siyisizathu esibi kakhulu sokuqamba kabusha. Ukuthi awusayitholi ilogo iheha ngokwanele akusho ukuthi kufanele uyishintshe. Izindleko aziyifanele inzuzo.
Lapho kungekho okushintshile enhlanganweni yakho - Uma zingekho izinguquko ezibalulekile enhlanganweni yakho, ukuqamba kabusha akusizi ngalutho. Asikho isidingo sokushintsha uhlelo oseluvele lusebenza.
Ngoba nje izimbangi zakho nazo zikhiqiza kabusha - Asikho isidingo sokuhamba nesixuku. Isinqumo sakho sokwenza kabusha igama kufanele sisekelwe ezidingweni zakho ngabanye kanye nokuqonda kwakho imigomo yakho yesikhathi eside kanye nomqondo ophelele.
Ukwenza kabusha ibhrendi njengokutshalwa kwezimali kwesikhathi esizayo kwebhizinisi lakho
Kuyiqiniso elingephikiswe ukuthi naphezu kwezindleko ezinkulu zesikhathi nezinsiza phakathi nenqubo yokuvuselela, ukwenziwa kabusha kwebhrendi kuhlala kuwutshalomali esikhathini esizayo. Isiphetho sithethelela zonke izinxushunxushu ezihilelekile kule nqubo. Njengoba sibonisile ngaphambilini, izinombolo zikhombisa ukwanda okukhulu kokuthengiswayo ngemva kokwenza ibhrendi kabusha. Inqubo yayinomusa kukho kokubili okuyisisekelo kanye nesithombe sethu senkampani.
Ukwakhiwa kabusha okunekhono kwandisa ukusebenza kahle kwenkampani iyonke, kukhuthaza ukuma okucacile, ukuthuthukiswa kwezimakethe ezintsha nezindawo zokusebenza.
Inqubo yokufaka uphawu noma ukwenza kabusha ibhrendi ingumsebenzi okhokhisa intela kakhulu obonakala ngokuphakama nokwehla kakhulu kunalokho okungase kubonakale endabeni yethu. Kudinga ukuhlela okuhlakaniphile, isikhathi esifanele, nezinsiza ezanele ukuze kulungiswe futhi udale uhlobo oluzokwenza isitatimende ngempela, luthuthukise umholo wakho futhi luthuthukise isithombe sakho esidlangalaleni. Ukuqamba kabusha kusho ukwenza intuthuko ukuze uhambisane nezikhathi.
Tags: inhlangano yabahwebi yenhlangano yokukhangisaI-BPBDbrandi-brand mascotisinqumo sokuthenga somkhiqizo womuntuulamula.ioi-lucidpressUkuphindaphinda
Njengoba iminyaka engu-5+ ekumaketheni kwedijithali, u-Yuliia uyashayela I-Lemon.ioukukhula ngokubhala kwakhe kanye nemiyalezo ecacile. Umbhali nomcwaningi enhliziyweni, u-Yuliia uyaqonda ukuthi ungazibandakanya kanjani nabafundi futhi akhe indaba ezogqama. U-Yuliia ubhale izingcezu ezingaphezu kuka-1500+ kule minyaka embalwa edlule ebumba kabusha umhlaba we-FinTech, iziqalo, nokumaketha okuqukethwe ngamakhono akhe.
Ungayisebenzisa Kanjani Ifonti Awesome ku-Illustrator nakwezinye Izicelo